Degso Adobe Premiere Pro loogu talagalay Windows
Degso Adobe Premiere Pro,
Adobe Premiere Pro waa barnaamij waqtiga firaaqada ah oo fiidiyoow leh oo leh fikradda waqtiga loogu talagalay in lagu hagaajiyo habka wax soo saarka fiidiyowga. Waxaad soo dejin kartaa ama ka dhoofin kartaa dhammaan noocyada qaabab warbaahinta barnaamijka. Barnaamijka, halkaasoo aad wax uga beddeli karto illaa 10,240 x 8,192 qaraarka, ayaa sidoo kale soo jiita dareenka leh astaamaha tafatirka 3D.
Soo Degso Adobe Premiere Pro
Barnaamijka, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ka baaraandegto fiidiyow xawaare sare leh oo ay ugu wacan tahay taageerada ay siiso kaararka fiidiyowga ee gaarka ah, sidoo kale wuxuu leeyahay saameyn maqal iyo muuqaal leh oo aad ku dalban karto faylasha fiidiyowga.
Soo bandhigida tiknoolajiyada xawaaraha GPU ee ugu dambeeyay kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay daawadaan fiidiyowga kahor intaan la farsameynin, Adobe Premiere Pro ayaa kuu badbaadinaysa waqti.
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee Adobe Premiere Pro waa noocyo badan oo taageero ah oo ay siiso kamaradaha badan. Qaabkan, waxaad si toos ah ugu wareejin kartaa sawirradaada dijitaalka ah ama fiidiyowyada aad qaadatay adigoo kaashanaya kamaraddaada barnaamijka isla markaana aad u bilaabi karto isla markiiba tafatir.
Waad isticmaali kartaa Adobe Premiere Pro, oo aad u adeegsan karto si waafaqsan waxyaabaha kale ee Adobe, ma aha oo kaliya tafatiraha fiidiyowga, laakiin sidoo kale waa barnaamij tafatirka guud ee warbaahinta markii loo baahdo.
Sida barnaamijyo badan oo Adobe ah, Adobe Premiere Pro, oo dalbanaya waxqabadka nidaamka sare, dhinaca kale, wuxuu u qabtaa si gaar ah dadka isticmaala. Marka laga hadlayo tafatirka fiidiyowga, waxaan hubaa inaan kugula taliyo inaad tijaabiso Adobe Premiere Pro, oo ah mid kamid ah barnaamijyada ugu sareeya.
Adobe Premiere Pro Noocyada
Wararkii Ugu Dambeeyay: 09-07-2021
Iyada oo leh Winamp, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu doorbida badan uguna isticmaalka badan...
Beddelaha YouTube Downloader waa aalad bilaash ah oo aad u adeegsan karto inaad kala soo baxdo...
Filmora Video Editor waa barnaamij ficil muuqaal ah oo fiidiyow ah oo ka caawiya dadka isticmaala...
Istuudiyaha Camtasia Studio waa mid ka mid ah shaashadaha ugu wanaagsan ee fiidiyaha lagu duubo iyo...
In kasta oo Jihosoft 4K Video Downloader ay u taagan tahay sidii YouTube video downloader, haddana...
Fraps waa barnaamij duubista shaashadda oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay duubaan fiidiyowyo...
Apple Music Converter waa barnaamij ballaarin kara xakamayntaada faylasha muusikada. Waad u rogi...
Adobe Premiere Pro waa barnaamij waqtiga firaaqada ah oo fiidiyoow leh oo leh fikradda waqtiga...
Gihosoft TubeGet waa soo dejiyaha fiidiyowga YouTube-ka oo bilaash ah. Haddii aad u baahan tahay...
DAEMON Tools Lite waa barnaamij kumbuyuutar abuuris bilaash ah oo aad si fudud ugu furi karto...
Soo dejiso Bandicam Bandicam waa duubista shaashadda bilaashka ah ee Windows. Si gaar ah, waa...